Torbee tokko dura fuulawwan Feesbuukii Korporeeshinii Birodkaastingii Itoophiyaa (EBC) fi Daandii Qilleensa Itoophiyaa butamanii turuunsaanii ni yaadatama. – ኢትዮጵያ ቼክ
Torbee tokko dura fuulawwan Feesbuukii Korporeeshinii Birodkaastingii Itoophiyaa (EBC) fi Daandii Qilleensa Itoophiyaa butamanii turuunsaanii ni yaadatama.
Wayita fuulawwan Feesbuukii kunneen butamanii turanitti ergaawwan ejjennoo dhaabbilee kunneenii bakka hinbuune maxxanfamuu isaanii dhaabbileen lamaan himaniiru.
Fuulawwan Feesbuukii Korporeeshinii Birodkaastingii Itoophiyaafi Daandii Qilleensa Itoophiyaa akkamfi eenyuun akka butaman ifatti himamuu baatus taateen mudate garuu waa’ee paaswordii (passwords) haalaan akka yaadnu kan nu taasisanidha.
Taateewwan dhaabbilee gurguddoo biyyattii lamaan mudatan ka’umsa godhachuun Itoophiyaa Cheek maloota dhaabbileefi namootni dhuunfaa nageenya toorawwan miidiyaa hawaasummaa, Imeelii (email), marsariitiifi akkaawuntiiwwan biroo isaanii cimsuuf isaan garagaaran irratti barreefama kana isiniif qindeessera.
Nageenya akkaawuntiiwwan keessanii eeguuf akkaawuntiiwwan garaagaraaf paaswordii garaagaraa fayyadamuu barabaachisa. Fakkeenyaaf akkaawuntiiwwan Feesbuukii, Imeelii, Inistaagiraamiifi kunneen biroof paaswordiiwwan garaagaraa fayyadamuu qabdu jechuudha.
Akkaawuntiiwwan garaagaraaf paaswordii tokko kan fayyadamnu yoo ta’e, akkawuntiin keenya tokko akka carraa harka namoota akkaawuntiiwwan keenya adamsanii keessa yoo seene carraan akkawuntiiwwan biroo namoota kunneeniin to’atamuu olaanaadha.
Kanaafis akkaawuntiiwwan hundaaf paaswordii gosaan gargar ta’e fi cimina qabu (walxaxaa ta’e) fayyadamaa. Kanaaf immoo mosaajiiwwan paaswordiiwwan keenya qixeessuuf nufayyadan (password managers) fayyadamuun gaariidha.
Mosaajiiwwan kunneen paaswordiiwwan keessan akka yaadattan isin gargaaruun dabalataan paaswordii cimaa akka filattaniifis isin garagaaru.
Gama biraatiin mala mirkaneessa lammaffaa (two-factor authentication) fayyadamuun maloota nageenya akkaawuntiiwwan keessanii eeguuf isin garagaaran keessaa isa biraati.
Malli mirkaneessa lammaffaa (two-factor authentication) gara akkaawuntii keessanii seenuuf maqaafi paaswordii keessaniin dabalataan gaafii mirkaneeffannaa dabalataa isin gaafachuun namootni biroon salphumatti akkaawuntii keessan akka hin to’anne isin garagaara.
‘Gmail’, ‘Dropbox’ fi ‘Outlook’ mosaajiiwwan mala mirkaneessa lammaffaa qaban keessaa isaan muraasa.
Dabalataan geessituuwwan (links) shakkisiisoo ta’an banuu dhiisuu, mosaajiiwwan intarneetii abuuruuf nu gargaaran (browsers) irratti paaswordii keenya kuusuu dhiisuu (‘Save’ gochuu dhiisuu) fi iddoowwan hawaasaaf banaa ta’anitti of eeggannoo malee ‘WIFI’ fayyadamuu dhiisuun nageenya akkaawuntiiwwan keenyaa cimsuun barbaachisaadha.
Kana malees koodii icciitii (passcode) fi ‘pattern’ bilbila keenyaa bifa icciitii qabuun fayyadamuun nageenya akkaawuntiiwwan keenyaaf gumaacha olaanaa qaba.
Koodii icciitii (passcode) bilbila keenyaa lakkoofsa dijiitii afur qabu gochuurra maloota biroo kan akka ashaaraa (barruu) fayyadamuun filatamaadha.
Mosaajiiwwan farra vaayirasii (anti-virus) haalaan fayyadamuufi mosaajiiwwan bilbila fi kompiitaroota keenyaa yeroo yeroon haaromsuun (‘update’ tolchuun) nageenya akkaawuntiiwwan miidiyaalee hawaasummaafi kunneen birootif ni gumaacha.